Garbahaareey: Shirweynaha wada-tashiga bulshada Gobolka Gedo ‘Midnimo One’ oo si habsami leh u socda – Kasmo Newspaper
Garbahaareey: Shirweynaha wada-tashiga bulshada Gobolka Gedo ‘Midnimo One’ oo si habsami leh u socda
Updated - May 6, 2015 4:00 pm GMT
Shirweynaha wada-tashiga bulshada Gobolka Gedo ‘Midnimo One’ oo si habsami leh u socda
Wejigii koowaad ee shirweynaha wadatashiga iyo midnimada bulshada ku dhaqan gobolka Gedo ayaa ka furmay magaalada Garbahaarey , iyadoo xafladdii furitaanka shirka ay ka soo qeybgaleen madax ka tirsan dowladda, Siyaasiyiin, Ganacsato iyo qeybaha bulshada ku dhaqan gobolka Gedo.
Intii ay xafladdu socotay ayaa waxaa laga jeediyay khudbado kala duwan, waxaana halkaasi ugu horreyn ka hadlay gudigii shirka soo abaabulay, kuwaasoo goobta ka sheegay ujeedka shirkan in uu yahay midnimo iyo wadatashi sal ballaaran oo bulshadu isku aragto, lagana doodi doono ajende qoto dheer oo ku aadan mustaqbalka dhow iyo midka fog ee deegaannada gobollada Jubbooyinka.
Guddoomiyaha degmada Garbahaarey Mudane Iimaan Cadow Kaarshe oo furitaanka xafladda ka hadlay ayaa tilmaamay shirkani inuu yahay mid looga golleeyahay in lagu gaaro midnimo iyo isku tashi ay bulshada gobolku ka yeelato danaheeda siyaasadeed iyo mid bulsho.
Sheekh C/kariin Sheekh Ibrahim (Indhacadde) ayaa akhriyay qodobada looga hadlayo shirka inta uu socdo, wuxuuna sheegay qodobadaas ay kamid yihiin qaabka ugu haboon ee loo mari lahaa dhamesytirida iyo xoojinta maammul-Goboleed ay yeeshaan gobolada Gedo, Jubbada dhexe iyo Jubbada hoose.
“Shriku wuxuu noqonayaa labo weji oo isku xirnan isna xoojinaya. Wejiga kowaad ee shirka waxaa ku wada hadli dooona beel ka mid ah beelaha dega goboladda Jubba si ay u xalisato wixii madow-madow ah ee ka dhex jira. Wejiga labaad ee shirku wuxuu noqonayaa mid ay ku kulmaan kuna wadatashadaan dhamaan beelaha wada dega gobolka Gedo, Shirka waxaa looga doodi doonaa dhaqangelinta heshiiskii Addis Abeba iyo kii muqdisho iyo dhameeystirka maamulka kumeel gaar ah” ayuu yiri Sheikh C/kariin.
Mudane C/waaxid Cilmi Goonjeex oo mar soo noqday Ra’iisul Wasaare KMG ah oo isna madasha ka hadlay ayaa sheegay in maanta oo kale ay tahay maalin xusid mudan, isagoo intaa ku daray in shirkan bulshadu ku tashanayso yahay mid u baahan dhinacyo badan in laga fiiriyo si loo helo waxa ay dadku u baahan yihiin, isagoona baaq caalami ah u diray adduunka oo ku aadan in loo gurmado dadka dhibaataysan ee gobolka ku sugan ee saameeyeen abaaraha iyo colaaduha.